မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများကို ကြိုးစား ဆောက်လုပ်ပေးနေဟု ? - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဇူလိုင် ၁၇
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနှင့် ကြိုးစား ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ပြောကြားသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယတစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ယင်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ တာမရှိတဲ့ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေကို ကျွန်တော်တို့အစိုးရ လက်ထက်မှာ ကြိုးစားဆောက်လုပ် ပေးသွားမှာပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လုပ်ငန်းဆိုတာ ညအချိန်မတော် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရတာ တွေ၊ မှုခင်းကိစ္စတွေရှိတယ်။ အုပ် ချုပ်ရေးမှူးအိမ်မှာက အမြဲတမ်းသာယာစိုပြည်နေနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးတွေ သတ်သတ်ဆောက်လုပ်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ကြိုး စားဆောက်လုပ်နေပါတယ်”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောသည်။ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး များသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန် ရရှိသည့်အိမ်များတွင်ရုံးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေရသည်မှာ လုပ်ငန်း တွင်ကျယ်မှုမရှိသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားတွင် အခြေခံကြသည့် ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခန်းများ ဆောက်လုပ်ရန် တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးခန်းများ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် မြေနေရာရှိပါက ကျပ်သိန်းတစ်ရာတန် ရပ်/ ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဆောက် အအုံများကို တစ်မြို့နယ်လျှင် တစ်လုံး ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်းသိရသည်။ ရေနံလက်ယက်တွင်းများမှ ရရှိသောငွေကြေးများကို စနစ်တကျသုံးစွဲနေကြောင်း၊ ပညာရေးပိုင်းတွင် ကျောင်းများအားအဆင့် မြှင့်တင်မှုများ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်း၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုများကို ထိထိ ရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စသည့်လုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လုပ်ဆောင်နေမှုများကို တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နွယ်ငြိမ်းကျေးရွာတွင် နယ်သာလန် နည်းပညာဖြင့် ဓာတ်ငွေ့သုံး စဉ့်ဖိုကြီးများ တည်၍ စဉ့်ထည်မျာ??